C Fikambanana mpanao asa soa FFAM Ny fiangonana no arofanina tsara indrindra
Ankoatra ny fanampiana ireo tanora eo amin’ny tontolon’ny fanatanjahantena mba tsy hidiran’izy ireny amin’ny lalan-diso mahasolafaka sy mba ho fitaizana azy ireo dia tafiditra ao anatin’ny vinan’asa nijoroan’ny fikambanana mpanao asa soa FFAM (Force féminine d’aide mutuelle)
ny fanampiana ny fiangonana. Nilaza ny filoha mpanorina sy mpitarika ny FFAM, Rasolofonoroniaina Julia Mickaëlle na i Mishah fa ny fiangonana dia sehatra iray goavana mitaiza ny tanora ary tena arofanina ho azy ireo mba hananany ho avy mamiratra. Voarakitra anaty baiboly rahateo ny tokony hanampiana ny mpiara-belona, ny fanaovana asa soa ka rariny raha tohanana ny fiangonana. Araka izany dia nanolotra fitaovana fanatsarana sy hananganana fotodrafitrasa ny FFAM ho fiaraha-mientana sy ho fanampiana. Ny Eglizy Paroasy Katolika Anosizato no nisitraka izany fanampiana ho fanatsarana izany. Nilaza ny tompon’andraikitra ny fiangonana fa mahavelom-bolo ny zavatra tahaka izao satria mitory fitiavana lalina izany eo amin’ny fanatanterahana ny asan’ny Tompo ary tsy tokony ho ketraka amin’ny fanaovantsoa mihitsy araka ny tenin’ny Tompo.